Ropa remavampires eHalloween - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Ropa remavampires reHalloween
Makirimu31 maminitsi3 vanhu125 makarori
Halloween yasvika uye mazuva ano inguva yekugadzirira mabikirwo ekutanga uye anotyisa egore. Gore rino ndakasarudza pane iri nyore uye inoyevedza vampire ropa.
Iyi recipe yakanaka kugadzirira a themed dinner kwaunofanirwa kushandira zvese zvinotapira uye zvinonaka zvekubika. Zviri nyore kuita uye mukati memaminitsi makumi matatu unenge wava netomatisi soup list yevaenzi vako.
Chimwe chinhu chakanaka pamusoro peiyi resipi ndechekuti iwe unogona kuishandira mukati midziyo yakakosha yechiitiko. Unogona kushandisa mad sainzi test machubhu, muroyi cauldron kana mamwe machubhu ebvunzo sepamufananidzo.
1 Ropa remavampires reHalloween
2 Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve iyi resipi yeropa yevampires?
Neresipi iyi mavampires ebato redu achaguta uye nekudyiswa zvakanaka.
Kubika nguva: 31M
Nguva yakazara: 31M
20 gd mafuta omuorivhi
1 level teaspoon (brown size) chili flakes (optional)
1 400g yematomatisi akasvuurwa
200 g yemuriwo muto
Isai fennel yakachena, hanyanisi yakasvetwa uye yakasvibiswa uye yakapwanyika garlic mugirazi. Tinodya panguva Masekonzi mashanu, kumhanya 5.
Tinoderedza zvidimbu zvakanamatira pamadziro egirazi kune mashizha.
Tinowedzera mafuta uye chili flakes. Isu tinotora programming 5 maminetsi, 120º, kumhanya 1.
Zvichakadaro, tinodhonza tomate, tichichengetedza mvura yatichashandisawo.
Zvadaro, wedzera madomasi akadonhedzwa mugirazi uye ubike iwo 5 maminetsi, 120º, kumhanya 1.
Zvadaro tinodurura mumvura yematomatisi, muto uye muto. Rongedza munyu uye pepper uye kubika 20 maminetsi, 100º, kumhanya 1.
Mushure menguva tinogaya 1 miniti, kumhanya 10.
Wedzera jet yakanaka yejusi remonamu uye gadzirisa munyu uye pepper.
Isu tinorega muto wemadomasi utonhorere zvishoma uye uzadze akati wandei machubhu ekuyedza uye test machubhu nawo.
Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve iyi resipi yeropa yevampires?
Sezvandambotaura, resipi ichiri a tomato muto nekubata kwakakosha.
El fennel Iyo inopa iyo inofadza kwazvo manotsi anobatanidza zvakanyanya pamwe nezvimwe zvese zvinongedzo.
And the chili flakes Vanochipa chinonhuwira chinonaka kwazvo, ndiko kuti, chinoti farei asi chisiri moto. Chero zvazvingava, iwe unotoziva kuti chinhu ichi chinogona kushandiswa pakuda kwako.
Yeuka kuti kana pamutambo kana pakudya kwemanheru pane vana vari pasi pemakore mana kana mashanu Iyo chili ichafanirwa kubviswa nekuti havasi vese vana vajaira izvi zvinonaka.
Iyo yekubheka ndeye vegan uye yakakodzera kune ese maceliacs kana kusashivirira kune gluten, mazai, lactose uye nzungu. Iyo inewo isingasviki 150 kcal saka zvichava zvakanaka kuti tive nekudya kwakakwana.
Zvinogona kuva chengeta mufiriji yakawanda 3 kana 4 mazuva chero bedzi iri mufiriji. Ita shuwa kuti mudziyo unokodzera huwandu hwesobho zvakanyanya sezvinobvira kuitira kuti pasave nemhepo yakawandisa. Nenzira iyi ichachengetedzwa zviri nani zvikuru.
Mamwe mashoko - 9 mazano asingakanganisi eHalloween
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Nyore, Halloween, Soup uye mafuta
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » General » Nyore » Ropa remavampires reHalloween
Mupunga nemukaka we soy